Malagasy mahantra Nitombo 10% tao anatin�ny 10 taona
Fanakalozana devizy Ireo mpanera no tena mahazo tombony
Saika miova isan’andro ny sandan’ny vola Malagasy mitaha amin’ireo vola vahiny. Omaly dia 3755,10 ariary ny takalon’ny euro iray raha ny fanadihadiana natao teny amina banky iray etsy Analakely. 4150,36 ariary kosa raha vola ariary no atakalo euro.
Fandraharahana sy toekarena “Ny vahiny no omena tombondahiny eto”
Izao akaiky fifidianana izao ve vao mody manovokovoka. Ianao rehefa manaiky hitondra fanjakana, dia manaiky hamaha ny olana eo amin’ny vahoaka, manaiky hampandroso ny firenena izay tantaninao, hoy kosa ny filohan’ny Antoko Miray Razakanirina Mahafaritsy Samuel.
Mampijaly « Ville »
Ialahy lesy ry Jean Eric mba jerijereo ihany ny lalana eto an-drenivohitra fa tsy hoe tsy tian’lisany ny ben’ny tanàna dia ny vahoaka no ampijaliana ah !Marina fa hoe tsy nifidy anareo ny vahoaka tamin’ny fifidiana ary mbola mety tsy hifidy anareo ihany koa amin’ity ho avy ity fa na izany nefa dia adidinareo feno ny mikarakara azy sy manompo azy fa mpiasam-bahoaka ianareo.
Fiakaran’ny vidin-jiro Orinasa maro no ho sempotra
Raha fidinan’ny vidim-piainana sy fihenan’ny fahasahiranana no andrandrain’ny rehetra fa atolotry ny fanjakana amin’ity taona vaovao 2018 ity, dia ny mifanohitra amin’izany tanteraka no hiseho. Vao miandoha ny taona , dia efa velon-taraina sahady ny mpandraharaha sy ny tokatrano mivelona amin’ny fampiasana herinaratra.
Fiahiana ara-tsosialy Taom-pahombiazana ho an'ny CNaPS ny 2017
Taom-pahombiazana ho an’ny CNaPS ny taona 2017. Be ny bainga voavadika mikasika ny fitsinjovana ny tombontsoan’ny mpiasa hisitraka ny zony. Mbola maro koa anefa ny fanatsarana kasaina hatao amin’ny taona manaraka.
Nivoaka tamin�ny fahanginany ireo mpahay toekarena Malagasy manoloana ny fahasahiram-bahoaka.
Notohanan’ny CREM (Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar) tamin’ny tarehimarika vitsivitsy nefa mafonja io fahantrana lalim-paka iainan’ny mponina eto Madagasikara io. Mandifotra ny 83%-n’ny Malagasy ankehitriny ny tsy fahampiana raha 73% izany 10 taona lasa. Ho 0,2%-n’ny mponina rahateo sisa no afaka hiaina ara-dalàna afaka 10 taona raha izao zava-misy izao no mitohy, hoy ity fikambanana mpandinika ny toekarena eto Madagasikara ity. Tranga mampalahelo niteraka fatiantoka goavana eo amin’ny 21 hatramin’ny 35 miliara dolara. Tandra vadin-koditra eo anivon’ny fiarahamonina Malagasy hatrizay moa ny fanomezana vahana ny kolikoly, ny kinamanamana sy kitranoantrano, ny fanondranana an-tsokosoko na koa ny famotsiambola teo amin’ireo mpitantana ny firenena, hoy ny mpikambana ao amin’ny Crem Hugues Rajaonson. Soso-kevitry ny fikambanana ny fanokafana fanadihadiana ireo tompon’andraiki-panjakana ambony voafidim-bahoaka sy olom-boatendy nifandimby nitondra an’i Madagasikara nanomboka ny taona 1976 mialoha ny hirosoana amin’ny fampihavanana tena izy eto amin’ny firenena. Vahaolana maharitra kosa ny famolavolan-drafitra politika ekonomika vaovao.